Estriol vs. estradiol: ကွဲပြားခြားနားမှုများ၊ တူညီခြင်းနှင့်သင့်အတွက်ပိုကောင်းသည် - မူးယစ်ဆေးဝါး သူငယ်ချင်း | ဇွန်လ 2022
ရပ်ရွာ ကုမ္ပဏီ, သတင်း ရပ်ရွာ၊ ကုမ္ပဏီ ကုမ္ပဏီသတင်း ကုမ္ပဏီ, မူးယစ်ဆေးဝါးဆိုင်ရာအချက်အလက် မူးယစ်ဆေးဝါး သူငယ်ချင်း ကျန်းမာရေး ကျန်းမာရေးပညာရေး သတင်း ပြင်းထန်သောအားကစား ကုမ္ပဏီ, ကျန်းမာရေးပညာရေး အိမ်မွေးတိရိစ္ဆန် ကနျြးမာရေးပညာရေး, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ ကုမ္ပဏီ, အဆိုပါကုန်ပစ္စည်း ဆေးပညာသတင်း, ကျန်းမာရေးပညာရေး
အဓိက >> မူးယစ်ဆေးဝါး သူငယ်ချင်း >> Estriol vs. estradiol: ကွဲပြားခြားနားမှုများ၊ တူညီခြင်းနှင့်သင့်အတွက်ပိုကောင်းသည်
Estriol vs. estradiol: ကွဲပြားခြားနားမှုများ၊ တူညီခြင်းနှင့်သင့်အတွက်ပိုကောင်းသည်
Estriol (E3) နှင့် Estradiol (E2) တို့သည်အီစထရိုဂျင် (တစ်ခါတစ်ရံအီစထရိုဂျင်ဟုခေါ်သည်) ဟုလူသိများသည့်အမျိုးသမီးဟော်မုန်းအမျိုးအစားနှစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ဤအီစထိုဂျင်ပုံစံများသည်ကိုယ်ခန္ဓာတွင်သဘာဝအလျောက်တွေ့ရှိရသော steroid hormones ဖြစ်သည်။ သွေးဆုံးပြီးနောက်အမျိုးသမီးများအတွက် Estriol နှင့် estradiol ကိုဟော်မုန်းအစားထိုးကုသမှု (HRT) အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
အက်စ်ထရိုနှင့်အက်ဒီဒီဒီသည်မတူညီသောအက်စထရိုဟော်မုန်းအမျိုးအစားသုံးမျိုးအနက်မှနှစ်ခုဖြစ်သည်။ တတိယအမျိုးအစားအီစထရိုဂျင်သည်အက်စထရွန် (E1) ဖြစ်သည်။ သွေးဆုံးချိန်တွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ခံစားနေရသောအမျိုးသမီးငယ်များထုတ်လုပ်သည်။ Estrone ကို HRT အတွက်ပုံမှန်အားဖြင့်အသုံးမပြုပါ။
အက်စထရိုဂျင်များသည်အချည်အနှောင်ဖြင့်အလုပ်လုပ်သည် အီစရိုဂျင် receptors ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ (ERαသို့မဟုတ်ERβ) ။ သူတို့ရဲ့တည်နေရာများထပ်နေနိုင်သော်လည်းအီစထရိုဂျင် receptor alpha (ERα) ကို endometrium, ရင်သားတစ်သျှူးနှင့်သားဥအိမ်များတွင်တွေ့ရှိရသည်။ Estrogen receptor beta (ERβ) ကိုကိုယ်ခန္ဓာ၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သော ဦး နှောက်၊ နှလုံး၊ ကျောက်ကပ်၊ အရိုးနှင့်အဆုတ်များ၌တွေ့ရသည်။
estriol နှင့် estradiol အကြားအဓိကကွာခြားချက်များမှာအဘယ်နည်း။
Estriol (Estriol ကူပွန် | Estriol အသေးစိတ်) ကိုတစ်ခါတစ်ရံ E3 သို့မဟုတ် oestriol ဟုရည်ညွှန်းလေ့ရှိသည်။ ၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိအဆိပ်အတောက်ဆုံးသောအက်စစ်ဖြစ်သည်။ estrone ကဲ့သို့ estriol ပမာဏသည်ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်သဘာဝကျပါသည်။ Estriol သည် FDA သည်အမေနှင့်သားအိမ်ဖယ်ရှားပြီးနောက်ခွေးများတွင်ဆီးသွားခြင်းကိုခွင့်မပြုပါ။ Estriol သည်လူသားများအတွက်ဆေးညွန်းဆေးအဖြစ် FDA ကအတည်ပြုသည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်အချို့သောဆေးဆိုင်များသည်အက်စ်ထရစ်ကိုအခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်ရောနှောရောင်းချနိုင်သည်။
Estradiol (Estradiol ကူပွန်များ | Estradiol အသေးစိတ်)၊ သို့မဟုတ် E2 သည် estrogens သုံးမျိုးအနက်အစွမ်းထက်ဆုံးဖြစ်သည်။ အချို့သောအက်စထရဒီဒီနမ်ကို Premenopausal အမျိုးသမီးများအတွက်ပါ ၀ င်သောဆေးပမာဏနိမ့်သောကလေးဆေးပြားများတွင်တွေ့ရှိနိုင်သည်။ ၎င်းကိုအက်စရိုဂျင်အစားထိုးကုသမှုအတွက်တက်ဘလက်၊ Estradiol ကို FDA မှအတည်ပြုထားသောထုတ်ကုန်များဖြစ်သော Estrace, Vivelle-Dot, Vagifem နှင့် Climara ကဲ့သို့သောအခြားသူများတွင်တွေ့နိုင်သည်။ FDA က estradiol ကိုလည်းအတည်ပြုခဲ့သည် bioidentical ဟော်မုန်း progesterone နှင့်အတူကုထုံး။
estriol နှင့် estradiol အကြားအဓိကကွဲပြားခြားနားမှု
မူးယစ်ဆေးအတန်း အီစထရိုဂျင် အီစထရိုဂျင်
ကုန်အမှတ်တံဆိပ် / ယေဘုယျအဆင့်အတန်း ယေဘူယျရရှိနိုင် ယေဘူယျရရှိနိုင်
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကဘာလဲ Incurin (ခွေးများအတွက်) နတ်သမီးပုံပြင်
လိမ်းဂျယ်လ် / ဂျယ်လီ
စံသောက်သုံးသောကဘာလဲ? သင့်ဆရာဝန်၏ဆေးညွှန်းအပေါ်မူတည်သည် သင့်ဆရာဝန်၏ဆေးညွှန်းအပေါ်မူတည်သည်
ပုံမှန်ကုသမှုဘယ်လောက်ကြာမလဲ သင့်ဆရာဝန်၏ညွှန်ကြားချက်အရကုသမှုကြာချိန်မှာကွဲပြားသည် သင့်ဆရာဝန်၏ညွှန်ကြားချက်အရကုသမှုကြာချိန်မှာကွဲပြားသည်
estriol စျေးနှုန်းသတိပေးချက်များအတွက် sign up ကိုနှင့်စျေးနှုန်းပြောင်းလဲသွားသည့်အခါအထဲကရှာပါ!
estriol နှင့် estradiol အားဖြင့်ကုသအခြေအနေများ
အီစထရိုဂျင်ကိုသွေးဆုံးရောဂါလက္ခဏာများခံစားရသောအမျိုးသမီးများအတွက်ဟော်မုန်းအစားထိုးကုသမှုအဖြစ်အများဆုံးအသုံးပြုသည်။ အက်စထရိုဂျင်များသည်ပရိုဂျက်စတုန်းသို့မဟုတ်အခြားစတီရွိုက်ဟော်မုန်းများနှင့်ပေါင်းစပ်ပြီးပရိုဂျက်စတီင်ဟုခေါ်သည်။ Estradiol သည် FDA သည်သွေးဆုံးရောဂါလက္ခဏာများကိုကုသရန်အတည်ပြုသည်။ ဤရောဂါလက္ခဏာများတွင်ပြင်းထန်သောတောက်ပခြင်း၊ ညဘက်ချွေးများနှင့်အရေပြားကိုဖလပ်ခြင်းကဲ့သို့သော vasomotor လက္ခဏာများပါဝင်သည်။ အခြားသွေးဆုံးရောဂါလက္ခဏာများတွင်အင်္ဂါဇာတ်ကျုံ့ခြင်း၊ ယောနိခြောက်သွေ့ခြင်း၊ ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်ပါးလွှာခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
Estradiol ကိုနောက်ကျသောအဆင့်တွင်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည် ရင်သားကင်ဆာ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အခြားအစိတ်အပိုင်းများကိုပြန့်နှံ့ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ကင်ဆာ (palliative care) ၏ပြင်းထန်မှုကိုလျှော့ချရာတွင်အသုံးပြုသည်။ metastasized သောရင်သားကင်ဆာ (ER +) ရှိသည့်အမျိုးသမီးများအတွက်မြင့်မားသောဆေး estradiol ကိုကုထုံးအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ထံမှလေ့လာမှုများအရသိရသည် ရင့်ကျက်မှု ရင်သားကင်ဆာသည် ESR1 ဗီဇကိုဖော်ပြပါကကင်ဆာသည် estradiol ကုထုံးကိုကောင်းစွာတုံ့ပြန်နိုင်သည်။
Estradiol ဆေးသည်အန်ဒရိုဂျင်အပေါ်မှီခိုရသောအဆင့်မြင့်ဆီးကျိတ်ကင်ဆာကိုကုသရန်လည်းခွင့်ပြုထားသည်။ စဉ်တွင် အီစထိုဂျင်အဆင့်များ ဆီးကျိတ်ကင်ဆာကိုဖြစ်စေနိုင်သည်၊ အချို့သောအမျိုးသားများအတွက်အက်စတီဒီယမ်ကိုပလာစတာကုထုံးအဖြစ်သုံးနိုင်သည်။ လေ့လာရေး Estradiol သည်အချို့သောဆီးကျိတ်ကင်ဆာအမျိုးအစားများအတွက်ထိရောက်သောကုထုံးတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းပြသည်။
Estriol သည် FDA မှအတည်ပြုသောလူသားများမဟုတ်ပါ။ သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံဟော်မုန်းအစားထိုးကုထုံးအတွက်အခြားဆေးများနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ၎င်းသည်အီစထရိုဂျင်ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်အီစထရိုဂျင်နှင့်ဆက်စပ်သောအခြေအနေများအတွက်ဆေးညွှန်းမပါသောဆေးတစ်မျိုးအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။ FDA ကအတည်ပြုထားသော estriol ပုံစံတစ်ခုတည်းဖြစ်သည် ကြင်နာ ၎င်းသည်သားဥအိမ်များနှင့်သားအိမ် (ovariohysterectomy) ကိုဖယ်ရှားပြီးနောက်ခွေးများတွင်ဆီးသွားခြင်းကိုမကုသနိုင်ပါ။
အက်စ်ထရီးရောနှင့်အက်ဒီရာဒီရောလ်တို့ကိုအက်ဒီရာရောနှင့်အခြားတံဆိပ်များဖြင့်အသုံးပြုခြင်းသည်ရာသီသွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါသက်သာစေရန်နှင့်သွေးဆုံးပြီးနောက်အရိုးဆုံးရှုံးခြင်း (အရိုးဆုံးရှုံးခြင်း) ကိုကာကွယ်သည်။ အရိုးသိပ်သည်းဆတွင်အက်စထရိုဂျင်သည်အဓိကအခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်သည်။ အီစထရိုဂျင်ချို့တဲ့သော Postmenopausal အမျိုးသမီးများသည်အရိုးနည်းပါးသောအရိုးများရှိနိုင်သည်။ အီစထရိုဂျင်ကုထုံးကိုလည်းမွေးဖွားပြီးစိတ်ကျရောဂါကုသရန်အသုံးပြုနိုင်သည်။ အချို့အဆိုအရ လေ့လာမှုများ , transdermal estradiol မွေးဖွားပြီးနောက်စိတ်ကျရောဂါသက်သာရာများအတွက်အသုံးဝင်သောပြသလျက်ရှိသည်။
အခြေအနေ Estriol Estradiol
ဟော်မုန်းအစားထိုးကုထုံး တံဆိပ်ကပ်ထားပါသည် ဟုတ်တယ်
သွေးဆုံး တံဆိပ်ကပ်ထားပါသည် ဟုတ်တယ်
ယောနိကျုံ့ တံဆိပ်ကပ်ထားပါသည် ဟုတ်တယ်
Vasomotor ရောဂါလက္ခဏာတွေ တံဆိပ်ကပ်ထားပါသည် ဟုတ်တယ်
ရင်သားကင်ဆာ (palliative စောင့်ရှောက်မှု) တံဆိပ်ကပ်ထားပါသည် ဟုတ်တယ်
အဆင့်မြင့်ဆီးကျိတ်ကင်ဆာ (palliative care) တံဆိပ်ကပ်ထားပါသည် ဟုတ်တယ်
ဆီးခုံမို့မို့ခြင်း (ခွေးများအတွက်) ဟုတ်တယ် မဟုတ်ဘူး
ရာသီခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ခြင်း တံဆိပ်ကပ်ထားပါသည် တံဆိပ်ကပ်ထားပါသည်
Postmenopausal အရိုးပွရောဂါ တံဆိပ်ကပ်ထားပါသည် တံဆိပ်ကပ်ထားပါသည်
ကလေးမွေးဖွားစိတ်ကျရောဂါ တံဆိပ်ကပ်ထားပါသည် တံဆိပ်ကပ်ထားပါသည်
estriol သို့မဟုတ် estradiol ပိုမိုထိရောက်ပါသလား
အီစရိုဂျင်ပုံစံသုံးမျိုးအနက်အက်ဒီဒီဒီသည်အက်ဆီးဒီယမ်ဖြစ်သည် အများဆုံးအစွမ်းထက်ပုံစံ ။ အက်စရိုဂျင်နှင့်ဆက်နွှယ်သောအခြေအနေများကိုကုသရန်ယူအက်စ်စားနပ်ရိက္ခာနှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဌာနမှအတည်ပြုသည် အက်စ်ထရိုနှင့်အက်စထရွန်းကိုယူအက်စ်တွင်အမျိုးသမီးများအတွက်ခွင့်မပြုပါ။ သို့သော်ဤအီစထရိုဂျင်များကိုပေါင်းစပ်ထားသောဆေးဝါးအချို့တွင်အသုံးပြုနိုင်ဆဲဖြစ်သည်။
estriol နှင့် estradiol နှင့်အတူအဘယ်သူမျှမ ဦး ခေါင်း -to- ခေါင်းကိုစမ်းသပ်မှုတွေမလုပ်ခဲ့ဘူး။ အချို့ လေ့လာမှုများ estriol သည်သွေးဆုံးရောဂါလက္ခဏာများအတွက်လုံခြုံပြီးထိရောက်ကြောင်းပြသခဲ့ကြသည်။ အမျိုးသမီးအင်္ဂါဇာတ်ကျုံ့ခြင်းအတွက်လိမ်းဆေးကိုအသုံးပြုလျှင် estriol ဖြစ်သည် အစီရင်ခံခဲ့သည် အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူထိရောက်သောဖြစ်။ estriol သည်အစွမ်းထက်သောကြောင့်၎င်းသည်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုနည်းပါးပါသည်။ အက်စထရိုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အခြားအီစထိုဂျင်ကုထုံးများကဲ့သို့ရင်သားကင်ဆာ၊ endometrial hyperplasia နှင့် endometrial ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေကိုမြင့်တက်စေနိုင်သည်။
Estradiol ကုသမှုသည်သွေးဆုံးပြီးနောက် HRT ကဲ့သို့အသုံးဝင်ပါသည်။ တကယ်တော့၎င်းသည်သွေးဆုံးရောဂါလက္ခဏာများအတွက်သတ်မှတ်ထားသောအသုံးအများဆုံးအီစထိုဂျင်ဖြစ်သည်။ estradiol ပုံစံအားလုံးသည်ဟော်မုန်းအစားထိုးကုသမှုအတွက်ထောက်ခံသည်။ အဆိုပါ transdermal patch ကိုဖြစ်ခဲ့သည် ပြသခဲ့သည် အကောင်းဆုံးကုထုံးများအတွက်တည်ငြိမ်အီစထိုဂျင်အဆင့်ဆင့်မှုရန်။
အကယ်၍ သင်သည်ဟော်မုန်းပမာဏကိုအကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်သောဆေးများကိုစဉ်းစားနေပါကသင်၏ရွေးချယ်မှုများကိုဆွေးနွေးရန်သင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူနှင့်ဆွေးနွေးပါ။ conjugation estrogens ပါ ၀ င်သည့်ဆေးဝါးများ (ဥပမာ Premarin, Prempro) ကဲ့သို့သောအခြားအီစရိုဂျင်ပုံစံများကိုသင့်အားအကြံပြုလိမ့်မည်။
estradiol vs. estriol ၏ကုန်ကျစရိတ်နှင့်ကုန်ကျစရိတ်နှိုင်းယှဉ်
လတ်တလောတွင် FDA မှအတည်ပြုထားသောဆေးဝါးများသည်လူသားများအတွက် estriol ပါ ၀ င်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ ၎င်းသည်များသောအားဖြင့် Medicare နှင့်အာမခံအစီအစဉ်များတွင်မပါ ၀ င်ပါ။ Incurin သည် estriol ၏အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ပြီးဆီးမထိန်းနိုင်သောခွေးများအတွက်ခွင့်ပြုထားသည်။ သင်ဝယ်ယူသည့်ဆေးဆိုင်ပေါ်မူတည်ပြီးကုန်ကျစရိတ်ကွဲပြားနိုင်သည်။ estriol များအတွက် SingleCare အထူးလျှော့စျေးလက်ရှိမရနိုင်ပါ။
Estradiol ကိုယေဘူယျအရေပြားအစုအဖြစ်ရရှိနိုင်သည်။ estradiol ၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များတွင် Minivelle, Climara နှင့် Vivelle-Dot တို့ပါဝင်သည်။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ် estradiol ၏ပျမ်းမျှငွေသားစျေးနှုန်းသည် Medicare နှင့်အာမခံအစီအစဉ်များနှင့်ကွဲပြားနိုင်သည်။ သို့သော်သင်သည် SingleCare လျှော့စျေးကဒ်ဖြင့်ဒေါ်လာ ၃၃ မှ ၆၃ အထိရနိုင်သည်။
ပုံမှန်အားဖြင့်အာမခံဖြင့်ဖုံးလွှမ်း? မဟုတ်ဘူး ဟုတ်တယ်
ပုံမှန်အားဖြင့် Medicare ဖြင့်ဖုံးလွှမ်း? မဟုတ်ဘူး ဟုတ်တယ်
စံသောက်သုံးသော 1 မီလီဂရမ်တက်ဘလက် တစ်နေ့လျှင် 1 မှ2မီလီဂရမ်
ပုံမှန် Medicare copay မဖုံး $ 0- $ 171
SingleCare ကုန်ကျစရိတ် Estriol အပေါ်အထူးလျှော့စျေးများကို SingleCare မှတစ်ဆင့်ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ $ 33- $ 63
estriol နှင့် estradiol ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ
အီစထရိုဂျင်ကုထုံး၏အသုံးအများဆုံးဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာရာသီလာခြင်းပြောင်းလဲခြင်း (သွေးထွက်ခြင်းပုံစံများပြောင်းလဲခြင်း)၊ အစက်အပြောက်များ၊ ကာလများအတွင်းနာကျင်ခြင်း၊ ရင်သားနူးညံ့ခြင်း၊ ပျို့ခြင်း၊ အော့အန်ခြင်းနှင့်ခေါင်းကိုက်ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ အခြားခေါင်းလျှော်ရည်နှင့်ပါးစပ်အီစထရိုဂျင်တို့၏ဖောင်းပွခြင်း၊ ကိုယ်အလေးချိန်တိုးခြင်းနှင့်ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းတို့ပါ ၀ င်သည်။
ယောနိကိုအသုံးချသည့်အခါလိမ်းသောအက်ဒီရို (estriol) သို့မဟုတ်အက်ဒီဒီဒီol (estradiol) သည်တိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုများဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများတွင်ယားယံခြင်းနှင့်မြင့်မားသောလျှို့ဝှက်ချက်များပါဝင်သည်။ အခြားပိုမိုဆိုးရွားသည့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများတွင်ဖန်းဂတ်စ်ကူးစက်မှုများ (kandididisis) ပါဝင်နိုင်သည်။
အီစထရိုဂျင်သည်ပြောင်းလဲခြင်းသို့မဟုတ်တိုးမြှင့်ခြင်းအတွက်ပြသခဲ့သည် melanin ထုတ်လုပ်မှု အရေပြားခြယ်ပစ္စည်းအတွက်တာဝန်ရှိပစ္စည်း။ အက်စထရိုဂျင်သည်အချို့သောအရောင်ခြယ်ပစ္စည်းများကိုတိုးပွားစေပြီးအရေပြားကိုမှေးမှိန်စေသည်။
အီစထရိုဂျင်အသုံးပြုခြင်း၏ပြင်းထန်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာသွေးပေါင်ချိန်မြင့်ခြင်း (သွေးတိုးရောဂါ)၊ နှလုံးရောဂါ၊ သွေးခဲခြင်း (thromboembolism)၊ ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါပိုမိုဆိုးရွားလာခြင်း၊ အခြားဆိုးရွားသည့်ဆိုးကျိုးများမှာသားအိမ်အတွင်းရှိ fibroids တိုးချဲ့ခြင်းနှင့်ရင်သားကင်ဆာနှင့်သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေမြင့်တက်ခြင်းတို့ပါ ၀ င်သည်။
ရာသီလာပြောင်းလဲခြင်း ဟုတ်တယ် * အစီရင်ခံတင်ပြခြင်းမရှိ ဟုတ်တယ် *
အစက်အပြောက် ဟုတ်တယ် * ဟုတ်တယ် *
Dysmenorrhea ဟုတ်တယ် * ဟုတ်တယ် *
ရင်သားကင်ဆာ ဟုတ်တယ် * ဟုတ်တယ် *
ပျို့ချင်သည် ဟုတ်တယ် * ဟုတ်တယ် *
အော့ ဟုတ်တယ် * ဟုတ်တယ် *
ခေါင်းကိုက်ခြင်း ဟုတ်တယ် * ဟုတ်တယ် *
အလေးချိန်တိုးလာသည် ဟုတ်တယ် * ဟုတ်တယ် *
ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း ဟုတ်တယ် * ဟုတ်တယ် *
ယောနိယား ဟုတ်တယ် * ဟုတ်တယ် *
ဖောင်းဖောင်း ဟုတ်တယ် * ဟုတ်တယ် *
အရေပြားခြယ်ပစ္စည်းအတွက်အပြောင်းအလဲများ ဟုတ်တယ် * ဟုတ်တယ် *
ရင်းမြစ် - DailyMed ( Estriol ), DailyMed ( Estradiol )
estradiol vs. estriol ၏မူးယစ်ဆေးဝါး interaction က
အက်စထရိုဂျင်ကိုအဓိကအားဖြင့် CYP3A4 အင်ဇိုင်းများဖြင့်အသည်းတွင် metabolized လုပ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောအချို့သောပ,ိဇီဝဆေးများ, antifungals, steroids နှင့် anticonvulsants အဖြစ် CYP3A4 inhibitors, ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ estrogenic မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အဆင့်ကိုတိုးမြှင့်စေနိုင်သည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်၎င်းသည်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုတိုးစေနိုင်သည်။
အချို့သောပiotိဇီဝဆေးများ၊ ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးဆေးများနှင့်ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးများကဲ့သို့သော CYP3A4 သွေးကြောများသည်သွေးအတွင်း estriol သို့မဟုတ် estradiol ပမာဏကိုလျှော့ချနိုင်သည်။ CYP3A4 အားသွင်းသူများသည်နောက်ဆုံးတွင်အက်စဂျင်ပါဝင်သောဆေးများနှင့်ထိရောက်မှုလျော့နည်းစေနိုင်သည်။ (ဥပမာဇယားကိုကြည့်ပါ)
Estriol နှင့် Estradiol သည်စပျစ်သီးဖျော်ရည်နှင့်လည်းထိတွေ့နိုင်သည်။ ဂေါ်ဖီသီးသီးဖျော်ရည်ကိုအက်စထရိုဂျင်ပါဝင်သောကုန်ပစ္စည်းများနှင့်စားသုံးခြင်းသည်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုမြင့်တက်စေနိုင်သည်။ သင်၏ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသမိုင်းကြောင်းကို endocrinology အထူးပြုဆရာ ၀ န်နှင့်ဆွေးနွေးရန်အရေးကြီးသည်။
မူးယစ်ဆေးဝါး မူးယစ်ဆေးအတန်း Estriol Estradiol
Ritonavir CYP3A4 inhibitor ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
Dexamethasone CYP3A4 သွေးဆောင် ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
estriol နှင့် estradiol ၏သတိပေးချက်များ
အီစထရိုဂျင်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အထူးသဖြင့်ပရိုဂျက်စမင်နှင့်မသောက်ပါက endometrial ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးစေသည်။ အသက် ၅၀ မှ ၇၉ နှစ်အတွင်းရှိအမျိုးသမီးများအတွင်း၌ Estriol နှင့် estradiol တို့သည်နှလုံးရောဂါ (myocardial infarction)၊ လေဖြတ်ခြင်း၊ အဆုတ် embolism (အဆုတ်တွင်သွေးခဲခြင်း) နှင့်နက်ရှိုင်းသောသွေးကြောကျဆင်းခြင်း (သွေးပြန်ကြောများတွင်သွေးခဲ) ဖြစ်နိုင်ခြေများလာသည်။ အမျိုးသမီးများနှင့်တူညီသောလူ ဦး ရေတွင်အက်စထရိုဂျင်အသုံးပြုမှုသည်ရင်သားကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုကိုမြင့်တက်စေနိုင်သည်ဟုဆိုသည် အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဦး ဆောင်မှု ။ အက်စထရိုဂျင်သည်အသက် ၆၅ နှစ်ကျော်လွန်သည့်သွေးဆုံးပြီးသောအမျိုးသမီးအချို့တွင်စိတ်ဖောက်ပြန်မှုဖြစ်နိုင်ခြေကိုမြင့်တက်စေနိုင်သည်။
Estriol, estradiol နှင့်အခြား estrogen နှင့်သက်ဆိုင်သောဆေးများသည်မမွေးသေးသောကလေးအားအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ သူတို့ကိုကိုယ်ဝန်သို့မဟုတ်နို့တိုက်နေစဉ်အတွင်းအသုံးမပြုသင့်ပါ။
estriol vs. estradiol နှင့်ပတ်သက်ပြီးမကြာခဏမေးသောမေးခွန်းများ
Estriol သည်သဘာဝအရခန္ဓာကိုယ်အတွင်းထုတ်လုပ်သည့်အီစထရိုဂျင်ပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ လူသားများတွင်ဟော်မုန်းအစားထိုးကုသမှုကို Estriol က FDA ကအတည်ပြုသည်မဟုတ်ပါ အချို့သောဆေးဆိုင်များသည်အက်စ်ထရစ်ပါသည့်ဆေးဝါးများကိုရောင်းဝယ်နိုင်သည်။ Estriol သည်ဆီးခုံမို့မို့ခွေးများတွင်ဆီးသွားခြင်းကိုသာကုသရန်ခွင့်ပြုထားသည်။
Estradiol သည်အက်စထရိုဂျင်၏အစွမ်းထက်ဆုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုအမျိုးမျိုးသောအမှတ်တံဆိပ်များနှင့်ယေဘူယျအမျိုးအစားများတွင်ရရှိနိုင်သည်။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များမှာ Estrace, Climara နှင့် Vivelle-Dot တို့ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ပါးစပ်တက်ဘလက်၊ transdermal patch (သို့) လိင်အင်္ဂါဖြတ်ပြီးရောဂါလက္ခဏာပြသောအမျိုးသမီးများအတွက်မိန်းမအင်္ဂါဇာတ်မုန့်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်းကိုနောက်ကျသောရင်သားကင်ဆာနှင့်ဆီးကျိတ်ကင်ဆာအတွက် palliative treatment အဖြစ်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။
estriol နှင့် estradiol အတူတူလား?
Estriol နှင့် estradiol အတူတူပင်မဟုတ်ပါ။ Estriol သည်ပိုမိုအားနည်းသောအက်စထရိုဂျင်ပုံစံဖြစ်ပြီးပေါင်းစပ်ဟော်မုန်းကုထုံးထုတ်ကုန်များတွင်သာတွေ့နိုင်သည်။ Estradiol သည်အက်စထရိုထက်ပိုမိုအားကောင်းပြီးဟော်မုန်းအစားထိုးကုသမှုအတွက် FDA ကအတည်ပြုသည်။
estriol သို့မဟုတ် estradiol ပိုကောင်းသလား
Estradiol သည်အက်စထရိုထက်ပိုမိုအားကောင်းသည်။ အက်စထရိုသည်အက်စထရိုဂျင်၏အားနည်းသောပုံစံဖြစ်ပြီးအက်ဒီဒီယိုးဒ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောလုံခြုံစိတ်ချရမှုအခြေအနေရှိနိုင်သည်။ estriol ၏ထိရောက်မှုနှင့်လုံခြုံမှုကိုလက်တွေ့စမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
ကိုယ်ဝန်ရှိနေစဉ် estriol (သို့) estradiol ကိုသုံးလို့ရပါသလား။
Estriol နှင့် estradiol ကဲ့သို့သောအီစထရိုဂျင်များကိုကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်ရှောင်ရှားသင့်သည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်ဤဆေးဝါးများကိုသောက်သုံးခြင်းသည်မွေးရာပါချို့ယွင်းချက်များပိုများလာနိုင်သည်။ နို့တိုက်နေစဉ်အက်စထရိုဂျင်မယူသင့်ပါ။
ငါအရက်နှင့် estriol သို့မဟုတ် estradiol ကိုသုံးနိုင်သလား?
Estriol သို့မဟုတ် estradiol ကိုအရက်ဖြင့်မသောက်သင့်ပါ။ အရက်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်သွေးထဲတွင်အီစထိုဂျင်ပမာဏကိုတိုးစေနိုင်သည်။ အီစထရိုဂျင်ကုထုံးဖြင့်အရက်ကိုသောက်ခြင်းသည်ရင်သားကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးစေသည်။
ဂေါ်ဖီထုပ်ဟင်းချိုအစားအသောက်၊ သင်သိရန်အမြန်အချက် ၅ ချက်
စိုးရိမ်စိတ်အတွက် beta blockers ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ
meloxicam (အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး) ကိုဘာဆေးတွေနဲ့ပေးနိုင်သလဲ။
monistat anti itch cream သည်ယားယံခြင်းကိုပိုဆိုးစေသည်